မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုအမြန်ဆုံးပြန်စနိုင်ရန် အစိုးရချင်းညှိနှိုင်းသွားမည်ဟု တရုတ်သံအမတ်ကြီးဆို | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုအမြန်ဆုံးပြန်စနိုင်ရန် အစိုးရချင်းညှိနှိုင်းသွားမည်ဟု တရုတ်သံအမတ်ကြီးဆို
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုအမြန်ဆုံးပြန်စနိုင်ရန် အစိုးရချင်းညှိနှိုင်းသွားမည်ဟု တရုတ်သံအမတ်ကြီးဆို
Posted by ရွှေညာသား on Jun 6, 2012 in Myanma News, Myanmar Gazette, News | 19 comments
ကဲ Mandalay Gazette ၀င်တွေရေ ဒီနေ့ မြန်မာပြည်ထဲမှာ ရခိုင် – မွတ်စလင်အရေး
အခင်းတွေဖြစ် တဲ့အချိန်မှာ မြန်မာပြည်ကိုနောက်ပိုးသိပ်မဲ့ စီမံကိန်းကို တရုတ်အစိုးရကနေပြီးတော့မှ
ယုတ်ယုတ်မာမာကြံစည်နေပါတယ်။အဲဒါကတော့ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို ပြန်စဖို့ပါပဲ။
ဒီနေ့ထုတ်7Days News ဂျာနယ်မှာ ပါတဲ့ သတင်းအရ တရုတ်သံအမတ်ကြီးက မြစ်ဆုံစီမံကိန်း
ကိုရပ်လိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ဆိုင်းငံ့ထားတာပါလို့ တိတိကျကျထပ်ခါတလဲလဲ ပြောနေတဲ့စကားသံပါရှိ
7 Days Journals နဲ့ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာသံအမတ်ကြီး မစ္စတာလီဂျန်ဝှာ တို့တွေ့
ကျွန်တော်တို့ထင်ထားတာက မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို လုံးဝရပ်ဆိုင်းလိုက်တာလားလို့ထင်ထားပေမဲ့
သက်ဆိုင်ရာ သတင်းအစအနတွေအနေနဲ့ရော ကျန်အစိုးရအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ပါ ခေတ္တရပ်ဆိုင်းတယ်ဆိုတဲ့
သတင်းဟာပျံနှံ့နေပါတယ်။ဒီနေ့7Days ဂျာနယ်ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တော့မှပဲ ပိုပြီးနားလည်သဘော
ပေါက်သွားပါတယ်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့ကြေသညာစာမှာလည်း သူ့အစိုးရလက်ထပ်မှာသာရပ်ဆိုင်းတယ်လို့ပါတာကိုး။
Mandalay Gazette ၀င်တွေကြေညာချက်ကိုသတိပြုမိမှာပါ။
ကဲ အဲဒီ့ တရုတ်သံအမတ်ကြီးက မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုအမြန်ဆုံးပြန်စနိုင်ဖို့ အစိုးရချင်းညှိနှိုင်းနေပါတယ်ဆိုတဲ့ စကားသံပါပဲ။
နဲ့ သဘာဝဓါတ်ငွေ့တွေမှန်သမျှကိုတရုပ်ကြီးအောက်ကြေးနဲ့ဝယ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ နိုင်ငံအတွင်း
မှာလိုအပ်ချက်အရ လျှပ်စစ်ကြောင့် ဆူပူမှု့တွေဖြစ်လာတော့ ဒီဇယ်တစ်ဂါလံတောင်လာမပို့ပါဘူး။
ကျုပ်တို့ သတင်းစာနဲ့ရေဒီယိုက ကော်ကော်ဆဲခဲ့တဲ့ အမေရိကန်ကြီးကသာ မီးစက်ကြီးတွေလှူလို့
တစ်မျိုး – ငှားလို့တစ်သွယ်နဲ့အကူအညီပေးခဲ့တာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံက (၆)ကျပ်လောက်နဲ့ဝယ်ထားတဲ့ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ကို (၂၄၈) ကျပ်ရမှ ပြီးတော့
တစ်ယူနစ်၂၂၅ ကျပ်နဲ့ရောင်းထားတဲ့ လျှပ်စစ်ကို ၆၄၀ ကျပ်ရမှာရောင်းပေးနိုင်မယ်လို့ပြောခဲ့တာဟာ မိတ်ဆွေစစ်တရုတ်ကြီးပါပဲ။
ဒီတော့စဉ်းစားကြည့်ပါ။ဘယ်လောက်တာဝန်မဲ့တဲ့ ယုတ်မာတဲ့ တရုပ်ကြီးလဲဆိုတာကိုပေါ့။
နောက်ပြီးတော့သူက ဆက်ပြောပါသေးတယ်။မြန်မာနဲ့တရုပ်ဟာ အိမ်နီးချင်းမိတ်ဆွေစစ်တွေပါတဲ့။
နောက်ပြီး မြစ်ဆုံကို စီမံကိန်ပြန်မစရရင်မြန်မာကို ကူညီပေးနေတာတွေရပ်ပစ်မဲ့သဘောနဲ့ ပြောနေတာလည်းရှိပါတယ်။အမှန်ကကျွန်တော်တို့ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအတွက် လျှော်ကြေးပေးပြီးသားပါ။
တရုပ်ပြည်ကပင့်လာတဲ့ ဗုဒ္ဒမြတ်စွယ်တော်ကို အလှူငွေကျပ်သန်းပေါင်းသောင်းနဲ့ချီပြီးလှူဒါန်း
ခဲ့ပြီးသားပါ။ဒါ့အပြင် ဒေါ်လာသန်းချီပြီလည်း လှူဒါန်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ မရှိရင်တောင် ရောင်းချပြီးတော့
မှလှူဒါန်းတဲ့ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ရိုးသားတဲ့ ဘာသာရေးအခြေခံစိတ်ကိုခုတုံးလုပ်သွားတာပါ။
ကျွန်တော်တို့လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ကျပ်သန်းပေါင်း ခြောက်သောင်းကျော် နဲ့ ဒေါ်လာသန်းချီနေတဲ့ငွေ
တွေကို စွယ်တော်စေတီတည်ထားမယ်လို့ပြောပေမဲ့ မယုံကြည်ပါဘူး။
ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ကွန်မြူနစ်စံနစ်နိုင်ငံဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် ဘာသာရေးအတွက်
အဲဒီ့လောက်အကုန်ကျခံမှာ မဟုတ်ပဲ သူတို့နိုင်ငံအတွက်ပြန်အသုံးချမှာပါ။
ကျုပ်တို့လှူလိုက်တဲ့ငွေတွေနဲ့ ဒီနီုင်ငံက ရွှေ၊ငွေ၊ဆန်စပါး၊ကျောက်မျက်ရတနာတွေကို ၀ယ်ယူပြီး
သူတို့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့စွယ်တော်ကို အဲဒီ့လောက်လှူတာ မကြားဖူးပါဘူး။ဘယ်တုံးကများ ကြားဖူးကြသလဲ။
မြန်မာနိုင်ငံကိုပို့ပြီးအပူဇော်ခံလိုက်ရင် ဒီလောက်ရမယ်ဆိုတာသိလို့ ဂွင်ဆင်လိုက်တာပါ။
အရင် အာဏာရှင်ဦးသန်းရွှေလက်ထပ်ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ ရေနွေးငွေ့စက်ခေါင်း
၁၀ စီးကျော်ရှိတဲ့အထဲက အကောင်းဆုံး ရေနွေးငွေ့စက်ခေါင်းနှစ်စီးကို လာယူသွားပါတယ်။
ချီပေးမယ်ဆိုတာကိုတောင် မောင်သန်းရွှေနဲ့သူ့မိန်းမကမရောင်းပဲနဲ့ ချစ်ကြည်ရေးဆိုပြီး အောက်ကြေးနဲ့
ကဲ စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါ။ဒါတွေကို အလားဈေးလောက်နဲ့ယူသွားတာဟာ မိတ်ဆွေစစ်နိုင်ငံလား
နောက်ပြီးတော့ သူတို့ဆီကသုံးမရတော့တဲ့ စက်ခေါင်းနဲ့တွဲစုတ်တွေကိုဆေးသုတ်ပြီး ဒီကိုပြန်ပေးပါတယ်။
သုံးမရတဲ့စုတ်ပျက်နေတဲ့ ရထားတွဲတွေပါ။ကဲ စဉ်းစားကြည့်ပါ။
ဦးသန်းရွှေက အင်္ဂလန်နဲ့ ဂျာမဏီကို ဘာလိုတရားဝင်မရောင်းသလဲဆိုတော့ ဈေးပိုရပေမဲ့ ဒီငွေကို သူ
ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလို လက်သိပ်ထိုး – ချစ်ကြည်ရေးအကြောင်းပြလိုက်တော့ ရသမျှသူ့အတွက်ကြည့်
အခုလည်း ဗုဒ္ဒမြတ်စွယ်တော်ကိုလှူဒါန်းတဲ့ငွေတွေကိုသာပြည်တွင်းမှာ ( ဥပမာ – နေပြည်တော်
မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ ) ဘုရားတည်ရင်တောင် ဒီလောက်ရင်နာရမှာမဟုတ်ပါဘူး။
အခုတော့ တရုပ်လက်ထဲကိုအကုန်ထည့်ပြီး မြစ်ဆုံစီမံကိန်းလျှော်ကြေးအနေနဲ့ ပေးလိုက်ရတာပါ။
ဒါကိုမကျေနပ်သေးတဲ့ သံအမတ်ကြီး က ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးနစ်နာနေပါတယ်။အမြန်ဆုံးပြန်စနိုင်
အောင် မြန်မာအစိုးရကို အရေးဆိုသွားမှာပါတဲ့။
ကဲ စကတည်းကမကောင်း – ကောင်နဲ့ပေါင်းခဲ့မိတာကိုး။
နောက်ပြီးရှိပါသေးတယ်။မြန်မာတွေသိထားတဲ့ မြေပုံထဲကလို ကျုပ်တို့နယ်မြေကြီးကမရှိတော့ပါ
ဒါဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဖီမော် – ဂေါ်လန် – ကန်ဖမ်ဆိုတဲ့ နယ်သုံးနယ်ကို ( အခု ဖိလစ်ပိုင်
နဲ့ ဖြစ်နေသလို ) မြန်မာတွေဆီက အတင်းရယူသွားတာပါ။ အမှန်က အဲဒီ့နယ်ထဲက သူတွေဟာ မြန်မာ
တိုင်းရင်းသား စစ်စစ်တွေပါ။ လီဆူး ၊ ရ၀မ် ၊ ဂျိမ်းဖော ၊ ဗမာတွေပါပဲ။အခုတော့ မျိုးမစစ်တော့ပါဘူး။
တစ်ရုပ်ကြီးက လူမျိုပစ်လိုက်ပါပြီ။ဘယ်လောက်ရင်နာစရာကောင်းသလဲဆိုတာကို ။
ဒါဟာ အာဏာရူးလက်တစ်ဆုပ်စာ လူတန်းစားတွေကြောင့် ၊ ငွေတစ်ခုတည်းကိုကြည့်တဲ့ သူတွေ
ကဲ မြန်မာပြည်သားတွေရေ အောက်က ကြွေးကြော်သံတွေကို ၀ိုင်းပြီးဖြန့်ဝေပေးကြပါ။
ရွှေညာသားရဲ့ ရင်ထဲက စကားသံတွေပါ။
Mandalay Gazette ၀င်တွေကနေစလိုက်ကြရအောင်ပါ။
မြန်မာနိုင်ငံကိုကျွန်ပြုသွားတဲ့ အင်္ဂလိပ်တောင် သီဟာသနပလ္လင်ကိုပြန်ပေးပါသေးတယ်။မကောင်းတဲ့ အိမ်နီးချင်းဆီက လည်း ရတာကိုပြန်တောင်းရမှာပါပဲ။
မြစ်ဆုံစ်ီမံကိန်းအပြီးဖျက်သိမ်းရေး ————– ဒို့ အရေး။
သမိုင်းဝင် ရေနွေးငွေ့စက်ခေါင်းနှစ်စီးလုံးပြန်ရအောင်ယူရေး ————————- ဒို့အရေး။
စွယ်တော်အလှူငွေပြန်ပေးရေး ——————– ဒို့အရေး။
ဖီမော် – ဂေါ်လန် – ကမ်ဖန် နယ်သုံးနယ် မြန်မာ ပြန်ရရှိရေး ——————– ဒို့အရေး ။
အဲ မေ့သွားလို့ ရွှေညာသား ကုလားတွေကိုလည်းမုန်းပါသည်။
နယ်ကျော်လာသူ ရိုဟင်ဂျာနဲ့ ယုတ်မာတဲ့ သူတွေကိုသာမုန်းတာပါ။
ကောင်းတဲ့ မွတ်စလင်ရှိသလို မကောင်းတဲ့သူတွေလည်းရှိမှာပါ။
ဒါပေမဲ့ ရွှေညာသားကတော့ ဗမာ/ဗုဒ္ဒဘာသာစစ်စစ်ဖြစ်ကြောင်းပါ။
တော်ကြာ ကုလားပြီးတော့ – တစ်ရုပ်ဖက်လမ်းလွှဲတယ်ဖြစ်မှာစိုးလို့ပါ။
နံမည်ကို တရုတ်မခေါ်ပဲ တယုတ်လို့ပြောင်းခေါ်တော့မယ်ဟာ…………..ခုကစပြီး။ ခုတလော ကြားရ
တဲ့သတင်းတွေက အကုသိုလ်များလိုက်တာ တယုတ်ကို မုန်းရ ၊ ကုလားကိုမုန်းရ နဲ့ ဟင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
စွယ်တော်အလှူငွေပြန်ပေးရေးဆိုတာတော့ ကန့်ကွက်တယ်ခင်ဗျ … ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေက စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ ဘုရားကိုလှူတာလေဗျာ … သူတို့ဘာသာ ဘယ်နေရာသုံးသုံး … ကောင်းတဲ့နေရမှာသုံးရင် ကုသိုလ်ရမှာပဲ … မကောင်းတဲ့နေရမှာသုံးရင် သူတို့ငရဲကြီးမှာပေါ့ … ဘုရားအလှူငွေပိုက်ဆံကို အလွဲသုံးစားလုပ်ရင် ဘယ်လိုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေ ကောင်းကောင်းသိပါတယ် … ကိုယ်ဘက် စေတနာသန့်သန့်နဲ့သာလှူပါ … တန်ပြန်အကျိုးခံစားရလိမ့်မယ် …. ကောင်းတာလုပ်ရင် ကောင်းတာဖြစ်မယ် … မကောင်းတာလုပ်ရင် မကောင်းတာဖြစ်မယ် ..
မ မေဖလားဝါးပြောသလိုပဲ တော်တော်လေးကို အကုသိုလ်များရပါတယ်။
soe ngel says:
ဟုတ်ပါတယ်။ မြစ်ဆုံကိစ္စကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ လက်သင့်မခံနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့ ဧရာဝတီကို ခေါင်းအဖြတ်မခံနိုင်ဘူး။ ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့မှ အထိမခံနိုင်ပါဘူးဗျာ။ သြော်..ဒါနဲ့….ကျွန်တော်က ခုမှ သည်ရွာမှာ သန်းခေါင်စာရင်းဝင်လိုက်တာပါ ခင်ဗျာ…..
အဲဒါတင် ဘယ်ကမလဲ ၊ မြန်မာနိုင်ငံထဲက ထွက်သမျှ ပရိုင်းမိတ်တွေ အားလုံး ကို အောက်ကြေးနဲ့ လိုက်နှိုက်ပြီး ကမ္ဘာမှာ သူ က ဘဲ လူပထမဆုံး ဖြစ်ခဲ့တာလို့ ပြောချင်နေတာ ။
သံအမတ်ကြီးရဲ့မြန်မာစကားပြန်က ကောင်းကောင်းရှင်းမပြဘူးထင်တယ်။ သမ္မတကြီးက ပြည်သူတွေကိုဂတိပေးပြီးသားပါ။ “သူ့အစိုးရ သက်တမ်းတလျှောက် ဒီ Project ကိုရပ်ဆိုင်းထားမယ်” လို့။
ကျတော်တော့ သမ္မတကြီးကို ယုံတယ်။
Always, China and Thailand are jealous of my country’s development.
Real friends are India, US and Europe.
“ကျွန်တော်တို့လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ကျပ်သန်းပေါင်း ခြောက်သောင်းကျော် နဲ့ ဒေါ်လာသန်းချီနေတဲ့ငွေ
ဝေဖန်ထားတာ ကြိုက်လို့ ပါ။အတော်ကို ခံပျင်းစရာ၊ရင်နာစရာပါဗျာ။
မြစ်ဆုံ စီမံကိန်းကို ပြန်စ မယ့်သူ ဘယ်သူမဆို နိုင်ငံ နဲ့ ပြည်သူကို စော်ကားတာပဲ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အသက်တွေ ပေးရပါစေ ။ ရအောင်ကာကွယ်မယ်။
မြစ်ဆုံ စီမံကိန်းကို.. ဥရောပ.ဒါမှမဟုတ်.. ယူအက်စ်က. ကန်ထရိုက်ပေး ဆောက်မယ်ဆိုရင်ကော..
အာမခံပါမယ်.. ငလျှင်ဒဏ်ခံဖို့.. လုပ်တာတွေကို..ပွင့်လင်းမြင်သာ လူထုကို တင်ပြမယ်..
.. ဧရာဝတီကို.. မြစ်ကြောင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတာ..ပါမယ်..
မီးရမယ်.. ရေရမယ်… ။ မီးရမယ်.. ရေရမယ်… ။ ရေမီးရမယ်. .လျှပ်စစ်ရမယ်..။
ရွာထဲမှာ ကြေးမုံဂျီးဆိုတဲ့ တရုတ်ကူမြူနစ်ပါတီကေဒါ မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်းဝါဒဖြန့်ချီရေးမှူးရှိတယ်။ သူပြောဒါ ရေကာတာတွေကို တကမ္ဘာလုံးမှာ ဆောက်နေဂျသတဲ့.. အခုလည်း တရုတ်ကြီးက မြန်မာပြည်ကို သနားလို့ အရှုံးခံဆောက်ပေးတာဆိုပဲ…အဲဒါ ဘယ်လိုသဗောရလဲဗြ..။
ဒီိပို့စ်ခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်လိုက်ကတည်းက ဦးကြောင်ကြီး ဘယ်အချိန်ထ ကုတ်မလဲစဉ်းစားနေတာ….
ဘဘကြီးက ရပ်ဆိုင်းထားတယ်ပြောတော့ အနည်းဆုံးသူ့သက်တမ်းအတွင်းကတော့ မဖြစ်နိုင်သေးဘူးထင်ပါတယ်။ စမယ်ဆိုရင်လည်း တတ်ကျွမ်းနားလည်သူတွေနဲ့သေသေချာချာ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးအကြံဥာဏ်ယူပြီး ရေရှည်အတွက်ကောင်းပြီး ပြည်သူများအတွက် နိုင်ငံအတွက်အကျိုးရှိစေမယ့် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်ပါစေလို့ပဲဆုတောင်းပါတယ်။
(မြန်မာနိုင်ငံတွင်မြန်မာများနှင့် အေးချမ်းစွာ အတူနေထိုင်သူများမပါ)
Aung AungMya says:
အနှိမ်ခံရ၊လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်ကြ၊ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းငုံ့ဘ၀။တော်ပါတော့ကိုတရုပ်ရယ်။ဒါငါတို့မြေ ဆိုတဲ့ စကားခေါင်းငု့ပြီးပြောခဲ့ရတာရပ်ပါရစေတော့။
ရိုးရိုးလေးပဲမေးလိုက်ပါ မြစ်ကျဉ်းသုံးသွယ်ရေကာတာစီမံကိန်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲပြသနာလေးတွေကော လို့။ တရုတ်ပြည်က မြစ်ကျဉ်းသုံးသွယ်စီမံကိန်းဟာ တရုတ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကတောင် မတက်ရောက်ပဲနေခဲ့ရလောက်အောင် နောက်ဆက်တွဲပြသနာတွေများပြားခဲ့ပါတယ်။ အခုလဲ မိုးရွာများလာရင် ပါတ်ဝန်းကျင်ဒေသခံတွေမှာ သေမိန့်ကိုစောင့်နေရတဲ့ သူတွေလို ဖြစ်နေပါတယ် လို့သိရပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရပ်တွေကြောင့် သူတို့ဆီမှာ စီမံကိန်းကြီးတွေမလုပ်တော့ပဲ တရုတ်တွေလိုတဲ့ လျှပ်စစ်ရဖို့ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အသက်တွေကို စတေးခိုင်းဖို့ ကြိုးစားနေတာပါ။ ဒီတရုတ်တွေကိုလဲ ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့အတူ သုတ်သင်ပစ်ကြရပါမယ်။
jon lay says:
သတင်စာနဲ့ အစိုးရမီဒီယာတွေမှာ ပြောပြောနေတာကို အားလုံးကကြားကြမှာပါ။ အဲဒါဘာလဲဆိုတော့ ယခုလက်ရှိအစိုးရဟာ ပြည်သူတွေရွေးကောက်တင်မြောက်ထားတဲ့အစိုးရပါလို့။ အဲဒါဆိုရင် ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒကို အလေးထားသင့်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်သူတွေက မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို မလုပ်စေချင်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုရင် ဧရာဝတီမြစ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အလေးထားရတဲ့မြစ်တစ်ခုဟာ တရုတ်အစိုးရဟာ သူတို့နိုင်ငံရဲ့ အသက်သွေးကြောမြစ်တွေကိုကျတော့ မထိရက်မတို့ရက်နဲ့ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားပြီး တော့ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ အဓိက အသက်သွေးကြောဖြစ်တဲ့ ဧရာဝတီမြစ် မြစ်မှာ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းလာလုပ်တယ်ဆိုတာဖြစ်သင့်ရဲ့လား။ ဒီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို စပြီးတော့လက်ခံခဲ့တဲ့ လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးကို တော်တော်အံသြပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် ဒီစီမံကိန်းကို သူစပြီးလက်ခံထဲက သူကောင်းစားဖို့ လုပ်တာလား။ ပြည်သူတွေကောင်းစားဖို့လုပ်တာလား ဆိုတာ ရှင်းနေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ယခုဒီမိုကရေစီစလုပ်တဲ့အချိန်ကစပြီး သေသေချာချာနဲ့ စနစ်တကျ ရှိရှိ စည်းစည်းကမ်းကမ်းရှိရှိနဲ့ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုလျှောက်သင့်ပါတယ်။ ဒီပို့စ်နဲ့ဆက်စပ်ပြီးတော့ ပြောရအုံးမယ် ဂျာနယ်တစ်စောင်မှာဖတ်လိုက်ရတယ်။ သမ္မတက ပြည်သူတွေ ရဲရဲဝင့်ဝင့် အကြံပေးကြပါလို့ ပြောတယ်။ သမ္မတကသာ ဒီလိုပြောနေပေမဲ့ အကြံပေးရင်ကော လက်ခံမှာတဲ့လား ကိုယ်ပေးတဲ့အကြံက သမ္မတဆီမရောက် ကိုယ့်အသက်အရင်ပြောက်မှာ သခင်ပါးဝ ကျွန်အားရတွေက လမ်းခုလက်မှာတင်ကိစ္စတုံးပစ်မှာပါ။ ပြန်ကြားရေးရဲ့ ဒုဝန်ကြီးဦးစိုးဝင်း သူ့ရဲ့ လက်သုံးစကားတစ်ခွန်းရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ အထက်လူကြီးနဲ့ တည့်အောင်ပေါင်းရမယ့်တဲ့။ အဲဒါမှ ကိုယ့်လိုချင်တာကိုရမှာတဲ့ အဲဒီစကားကိုပြန်ကြားရတော့ တစ်ခုသွားစဉ်းစားမိသွားတယ်။ သူလည်းအထက် လူကြီးနဲ့ တည့်အောင်ပေါင်းလိုက်လို့ ဒီရာထူးရသွားတာပါလားလို့လေ။အဲဒါကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူတော် လူမှန်တွေက နေရာမရကြရှာဘူး။ အထက်လူကြီးကို ဖားတတ် ယားတတ်တဲ့သူတွေသာ နေရာရကြတာပါ။ အထက်လူကြီးကလည်း ဖားလို့ ယားလို့ ရာထူးရလာတာဆိုတော့ သူကလည်း သူ့လက်အောက်က ၀န်ထမ်းတွေကို သူ့ကို ဖားတဲ့ ယားတဲ့ လူ၊ သူ့သြဇာခံတဲ့လူပဲ အလိုရှိတော့ပါ။ အဲဒါမှ သူပြောသမျှ လက်ညိုးထောင် ခေါင်းငြိမ်လုပ်နေမှာလေ။